Kutheni ababonisi boMama wethu waseMedjugorje? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
IMedjugorje yenye yezona ndawo zindwendwelweyo "ezisebenzayo" kwihlabathi. Ngomhla ka-Meyi ka-2017, ikhomishini eyasekwa nguPopu Benedict XVI kwaye ikhokelwe nguKhadinali Camillo Ruini yaqukumbela uphando lwayo kwizibuko. bavotela ukuthanda yokuqonda ubume obungaphezu kwemvelo kobo buvuvu bokuqala asixhenxe. NgoDisemba waloo nyaka, uPopu Frances waphakamisa ukumiswa kwenkqubo yohambo lwedayosese, ngokunyusa iMedjugorje kwisikhundla sendawo engcwele. UBhishophu Omkhulu waseVatican uHenryk Hoser wanyulwa ngupopu ukuba ajongane nokunyanyekelwa kwabahambi ngezonqulo apho, evakalisa ngoJulayi 2018 ukuba le dolophana "ingumthombo wobabalo lwehlabathi liphela." Kwincoko yakhe noBhishophu uPavel Hnilica, uPopu John Paul II wathi, "iMedjugorje yinto eqhubekayo, ukwandiswa kukaFatima." Kuza kube yimhla, izibhengezo kunye neentsikelelo ezihamba nazo zivelise ukuphiliswa kwamaxwebhu angaphezu kwamakhulu amane, amakhulu emisebenzi yobufundisi, amawaka eenkonzo emhlabeni jikelele, kunye nokuguquka okungenakubalwa.
Imiyalezo evela kwiiVisionaries zeNenekazi lethu leMedjugorje
IMedjugorje-Ingqina ngoYesu ovukileyo
Sukuvumela izilingo ukuba ziyenze lukhuni intliziyo yakho kunye nomthandazo ukuba ube njengentlango.
Imiyalezo emihlanu yeMedjugorje
Imiyalezo yeMedjugorje ngumnxeba woTshintsho, ukuguqulwa ukubuyela kuThixo. Inenekazi lethu lisinika amatye amahlanu okanye ...
exhonyiweyo imiyalezo, Videos, Kutheni le nto imboni?.
← Kutheni uPedro Regis?
Kutheni uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta? →